ओलीलाई अध्यक्षबाट ह’टा’एर नयाँ कमिटी गठन गर्ने माधव नेपा’लको घो’षणा:: Mero Desh
ओलीलाई अध्यक्षबाट ह’टा’एर नयाँ कमिटी गठन गर्ने माधव नेपा’लको घो’षणा
Published on: १९ चैत्र २०७७, बिहीबार ०५:४९
“काठमाडौं, १९ चैत्र । नेकपा (एमाले) का नेता माधव कुमार नेपालले काँस्कीमा आफू पक्षीय कमिटीको घो’ष णा गरेका छन् । उनले आफूलाई देशभरिका नेता तथा कार्यकर्ताको दरिलो साथ रहेको भन्दै अब केन्द्रमा पनि छिट्टै छुट्टै कमिटी घो’ष’णा गर्ने जनाए ।
“उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट ह’टा’एर केन्द्रमा नयाँ कमिटी गठन गर्ने घोषणा पनि गरे ।आज (बिहीबार) बिहान कास्कीमा आफू पक्षीय क’मि’टीको घो’ष’णा गर्दै नेपालले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू केपी ओलीको का’रबा’हीबाट नडराएको भन्दै खु’ट्टा कमाएर नभा’ग्ने र नड’ग्ने पनि बताए ।
“नेता नेपालले हिजोमात्रै काठमाडौंमा आफू पक्षीय युवा संघको कार्यालयको उ’द्घा’टन गरेका थिए । उक्त अव सरमा नेता नेपा”लले नेता तथा कार्यकर्ता”लाई पार्टी कार्यालय राख्नको लागि घर हेर्नपनि आग्रह गरेका थिए ।श्रोत रिपोर्टस नेपाल।
यो पनि,,एमाले पार्टीले निलम्बन गरे पछि यसरी रोए माधवकुमार नेपाल !
“काठमाडौ । नेकपा एमालेले नेता माधवकुमार नेपाल र भीम रावललाई ६ महिनाका लागि पार्टीवाट निलम्बन गरेको छ । पार्टीको विधान”विपरीत चलेको भन्दै नेता नेपाल र रावललाई कारबाही गरेको हो। पार्टीको चैत्र ७ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सोधेको स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै ६ महिनाका लागि पार्टी साधारण सदस्यबाट नै निलम्बन गरेको छ।
“नेता नेपाल र रावललाई पार्टीबाट निलम्बन गरिएको पत्र समेत पठाइसकेको जनाइएको छ। नेपाललाई पठाइएको पाँच बुँदे पत्रमा उल्लेखित मिति भने फागुन १६ को राखिए को छ। यद्यपि चैत १२ को स्पष्टीकरणको प्रसंग उल्लेख छ ।नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले स्पष्टीकरण सोधेर विधि,
“पद्धती र प्रक्रिया पूरा गरेर नै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र डा। भीम बहादुर रावललाई साधारण सदस्यबाट ६ महिनाको लागि निलम्बन गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता नेपाल र राव”ललाई ६ महिनाको लागि साधारण सदस्यबाट नि”लम्बन गरेको निर्णय उल्लेख गर्दै थापाले यस्तो बताएका हुन् ।
“उनले नेता नेपाल रुँदै गरेको तस्विर सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्,”स्पष्टीकरण सोधि विधि, पद्धती र प्रक्रिया पूरा गरेर यो कार्य गरिएको हो । जबकि, प्रचण्ड नेपालले स्पष्टीकरण नै नसोधी कंगारु कोर्टले जस्तै हामीलाई कथित लिनम्बन गरेका थिए ।”
“नेता नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आफूलाई हटाउने अधिकार नभएको बताएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूमाथि गरेको कारबाहीबारे सामाजि क सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले ओली सिंगो पार्टीको नभएर गुटको मात्र अध्यक्ष भएको दाबीसमेत गरेका छन्।
“अध्यक्ष ओलीले नेपाल र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल लाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन्।ओलीलाई मलाई हटाउने कुनै अधि कार छैन। यस बारेमा मलाई जान”कारी पनि छैन’ नेता नेपालले भने,‘ओली एमालेको अध्यक्ष नै होइनन्।’
“ओली अहिले सिंगो पार्टीको नभइ गुटको अध्यक्ष भए को भन्दै नेपालले ओलीले पार्टीको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने दाबी गरे। केन्द्रीय कमिटी नै विघटन गरेका व्यक्ति ले कारबाहीको हल्ला फैलाउनुको कुनै अर्थ नहुने उनको भनाई छ।
“गुटको अध्यक्षले पार्टीको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने भएकाले कारबाही वा निलम्बनको कुनै अर्थ नहुने नेपाल ले लेखेका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेता नेपालसहित चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
यो पनि,,च्यापिए बाबुराम, जसपाबाटै आउट गर्ने तयारि !यस्तो छ का’रण।
“काठमाडौं। माओवादी, नयाँ शक्ति हुँदै मधेस केन्द्रित दलमा पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अहिले चौ’तर्फ उपेक्षामा छन्। मधेश केन्द्रित संगठन र नेताहरु को बाहुल्यता रहेका दलहरुबीच ए’कीकरण गरेर पहाडी क्षेत्रमा समेत दलको संगठन विस्तार गर्ने भनिए पनि भट्ट राईले जसपामा गएर पार्टीलाई पहाडी र हिमाली षेत्रमा विस्तार गर्न त सकेनन् नै अहिले पार्टीभित्र उनी आफैं उपेक्षित छन्।
“पार्टीको संगठन बाबुरामको नयाँ श’क्तिको पालामा जस्तो थियो उस्तै नै छ। उनले पार्टीमा संघीय परिषदको अध्यक्षको जिम्मेवारी त पाएका छन् तर उनको सुनुवाइ भने भइरहेको छैन। भट्टराई पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि हटाउ”नुपर्ने पक्षमा छन्। ओली हटाउने अभियानमा अर्का नेता उपेन्द्र यादव पनि छन्।
“तर, महन्थ ठाकुरसहित तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी का नेताहरु भने ओलीसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा पुगिसके का छन्।बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव लगायतका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता साझेदारीका लागि कार्यदल गठन गरेका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अहिले त्यो कुरालाई धेरै अगाडि बढाइसकेका छन्।
“ट्वीटरबाट धारणा राखेका भट्टराईलाई ट्वीटेहरुले नै जवाफ दिन्छन् जुन जवाफले राजनैतिक रुपमा कुनै तुक राख्दैन। भट्टराईको यो निरीह स्थितिले दुई प्रश्न जन्माएको छ । के उनी पार्टीभित्रै कुरा राख्न नस’क्ने, आफ्नो एजे’ण्ड मा छलफल गराउनै नसक्ने अ””वस्थामा पुगेका हुन्? वा उनी अरु कसैको स्वा’र्थमा निरन्तर प्रधानमन्त्री”विरु’द्ध लागिपरेका छन्?
“पछिल्लो समय समाजवादी पार्टीको राजपा पक्ष प्रधान मन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्ने सहमति नजिकै पुगिसकेको छ। सरकारले मधेस आन्दो लनसँग स”म्बन्धित देशभर रहेका सबै मु’द्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै जनता समाज वादी पार्टी (जसपा) लाई सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुलेको हो।
“जसपाले सरकारमा सहाभागी हुन सरकारसँग चारवटा माग राखेको थियो। ती मागमध्ये मधेस आन्दो”लनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्तालाई मुख्य माग बनाएको थियो। बिहीबार बसेको मन्त्रि परिषद बैठकले मधेस आ’न्दो’लन सँग सम्बन्धित सबै मु’द्दा फिर्ताका लिने निर्णय गरेपछि जसपा लाई सरकारमा सहभागी हुन वा बाहिरै बसेर सर -कारलाई समर्थन गर्ने बाटो खुला भएको हो।
“बाबुराम भट्टराईले ओलीलाई जसरी पनि हटाउनुपर्ने बताइरहँदा पार्टी भने उनलाई बाइपास गरेर अगाडि बढिरहेको छ। यस्तोमा बाबुराम भने पार्टीभित्र आफ्ना एजेण्डामा छलफल समेत गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। केही दिनअघि भट्टराईले पार्टीमा लगेको बैठक सिधै अ’स्वीकृत भएर फर्किएको थियो।त्यसयता भट्टराई ट्’वीट गर्छन्।
“ट्वीटरबाट धारणा राखेका भट्टराईलाई ट्वीटेहरुले नै जवाफ दिन्छन् जुन जवाफले राजनैतिक रुपमा कुनै तु’क राख्दैन। भट्टराईको यो नि’रीह स्थितिले दुई प्रश्न जन्माए को छ । के उनी पार्टीभित्रै कुरा राख्न न’सक्ने, आफ्नो ए’जेण्डमा छलफल गराउनै न’सक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्?
“वा उनी अरु कसैको स्वार्थमा नि’रन्तर प्रधान मन्त्रीविरु ‘द्ध लागिपरेका छन्? शनिबार मात्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई दिए को समर्थन फिर्ता नलिन आफू लाई निकै ठूलो द’बाब भएको बताएका थिए।
“प्रचण्डले आफू””लाई निकै द’बाब भए पनि अब भने आफ्नो नै’तिकताले सरकारलाई समर्थन गरिरहन नदिने भएकोले अब समर्थन फिर्ता लिने बताएका थिए।प्रचण्डले द’बाब कसको हो भनेर खुलाएनन्। भट्टराईको पछिल्लो स्थिति पनि प्रचण्डकै जस्तो हो कि भन्ने आ’शंक पनि बढेको छ।
“ओली सरकार विस्थापित गर्ने आफ्नो एजेण्डा लाई पार्टीभित्र छलफल गराउन नसक्ने तर विचार नमिलेका आधारमा पार्टीबाटै अलग्गिन समेत नसक्ने अवस्थामा भट्टराई परेका हुन सक्ने अ’नुमान गरिएको छ।
“अर्को आशंका हो भट्टराई अरु कसैको एजेण्डा मा त चलिरहेका छैनन्। ओली सरकार नेपाल भित्र मात्रै नभएर विदेशी शक्तिको आँखामा समेत बिझाइरहेको छ। यस्तो मा ओलीलाई विस्थापित गर्न चाहने कुनै विदेशी शक्तिको गोटी भएर उसको स्वार्थअनुकूल पो भट्टराई चलिरहेका छन् कि भन्ने आ’शंका समेत गर्ने ठाउँ छ।यदि यस्तो नभए पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्षको कुरा पार्टीभित्र सुनु वाइ नहुने स्थिति नआउनुपर्ने थियो।
“अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि आफ्नै पार्टीभित्र भट्टराई उपेक्षित छन्, यो देखिएको कुरा हो। तर, उनको यो स्थितिको का’रण के हो भन्ने अहि”लेसम्म प्रस्ट छैन। विकसित राजनैतिक घट’नाक्रमसँगै त्यो कारण पनि खुल्दै जाला भन्ने आशा भने गर्न सकिन्छ।श्रोत खबरमाण्डु।